Izindaba - Ukuhamba okuhle ukuya eKorea.
Ukuhamba okuhle ukuya eKorea.
ISHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD,
Umphakeli wakho nozakwethu eChina ukuthola ibhokisi / ubuciko obusezingeni eliphakeme.
Ukuze wenze kusebenze isimo senkampani, jabulela umzimba nengqondo yabasebenzi, ucebise impilo yezimfundamakhwela zabasebenzi, uqinise ukuxhumana phakathi kwabasebenzi, ISHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD uhlele ingxenye yabasebenzi bethu ikakhulukazi abasebenzi abavela emnyangweni wezentengiso ukuthi bavakashele iSouth Korea ngoNovemba. Lolu hambo belulungiswe kahle yinkampani futhi luhleleke kahle futhi lubushelelezi. Wonke umuntu udlala kakhulu, vumela umzimba nengqondo kube ukuphumula okuhle kakhulu, lapho ungafunda khona ngesiko laseKorea, i-geography, isiko langokwezifiso, amasiko abantu, kepha futhi banambitha ukudla kwaseKorea okuhlukahlukene. I-Autumn Tour ngumcimbi waminyaka yonke ohlelwe yinkampani. Ukuthuthukiswa kwemisebenzi yokucebisa impilo yamatoho yabasebenzi, ukugqugquzela intshisekelo yabasebenzi, ukuqinisa ukuxhumana phakathi kwabasebenzi, ukukhulisa ukuqwashisa kwethimba kudlale indima enhle ekukhuthazeni.
Phakathi nalolu hambo, siphinde savakashela amakhasimende enkampani yaseKorea ndawonye. Uvakashele igumbi lesampula nefektri yekhasimende, waba nomhlangano omnandi nokuxoxisana nekhasimende. Ukuqondwa okungcono komlando wenkampani yekhasimende, indlela yokukhula, ukuqondiswa kwentuthuko nezinhloso zokuthuthuka zesikhathi esizayo. Lolu hambo ludonse kangcono ibanga phakathi kwethu namakhasimende, zombili izinhlangothi kube ukuqonda okungcono, yisimo sokuwina.
INingizimu Korea ingumakhelwane wethu futhi iyizwe elinamandla amakhulu emakethe, futhi ngo-2018 ifinyelele ngokuthula endaweni yesihlanu emakethe ye-e-commerce yomhlaba wonke. Ngemuva kwalolu hambo kanye nophenyo olunzulu nocwaningo, sithole ukuthi kukhona nemininingwane yokwengeza ibhizinisi eKorea. Ngaphansi kwethonya lokuqubuka komqhele omusha, ibhizinisi elingaxhunyiwe kwi-inthanethi lehlile, kepha ibhizinisi eliku-inthanethi liyachuma, amandla amakhulu makhulu. Kufanele silisebenzise kahle leli thuba ukuvula imakethe yaseKorea futhi sandise isikali sebhizinisi.
Isikhathi Iposi: Dec-16-2020
Cha. 6 BaoTuQuan North Road, Jinan, China